सूर्या लाइफको हकप्रद खुल्दै, कहाँ जाने भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » सूर्या लाइफको हकप्रद खुल्दै, कहाँ जाने भर्न ?
काठमाडौं - वैशाख ३१ गतेदेखि सूर्या लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले ४०% हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले १०ः४ अनुपातमा २८ लाख ८७ हजार ५ सय कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्न लगेको हो । यसमा असार ३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । हाल यसको चुक्ता पुँजी ७२ करोड १८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छ । हकप्रदपछि पुँजी १ अर्ब १ करोड ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।
बिक्री प्रबन्धक एनआइसी एसिया क्यापिटल बबरमहल, काठमाडौं तथा आस्वामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हकप्रदका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । यस्तै, सूर्या लाइफको उपत्यका भित्रका नक्साल, काठमाडौं र पाटन, ललितपुर तथा उपत्यका बाहिरका अधिकांश शाखाबाट पनि आवेदन दिन सकिन्छ ।